Super Diamond Deluxe ekukhumbuza kubunewunewu ingundoqo! Loo nto ikwenza uzive njani na ukuba phakathi anqabileyo abengezelayo namnikelo zekhefu ezininzi. Ubuhle slot lilele yokuba akukho adakasa okanye iisimboli usichithachithe. Ngoko ke, kufuneka sijolise kwabo izayamaniso 3 okanye 4, ukuze ndinigxothe ekuyeni win. Zonke ufuna na isuntswana luck ukuba abe ngukumkani Super Diamond Deluxe namacwecwe slot.
IGT okanye International Gaming Technology software yekhasino midlalo ngokubonelela inkampani ukususela 2006 egameni Gtech Corporation xa Gtech abazifumene Lottomatica kwi 2006. Ukususela ngoko, inkampani eyenza imidlalo slot emangalisayo mesmerizing abangabathandi yekhasino ngoku qho emva koko. kutshanje, e 2015, inkampani wafumana igama layo xa ufumene inkampani American IGT waza wathabatha ngapha kwegama layo.
Super Diamond Deluxe ngumdlalo slot elula. Lo mxholo enxulumene amatye anqabileyo njengoko kwekorale iisimboli, jades ephilayo cutwork entle. Ngoko i bhobhile khangela needyasi kunye nemvelaphi nobomvu ngamatye ukuqaqamba phezu kwayo. Segments udlalwa nge 5 namacwecwe kunye 10 paylines kwaye akukho mfuneko yokuba umgca win angaqala kuphela ukusuka bayotywe kuqala. Ngaphandle kwistibhiya, 10, J, Q, K, kwaye A ke imiqondiso ngokuhlawula eliphantsi. Akukho adakasa okanye Uchithachitha kule slot ukuba iifom zekhefu kuwe. Ibhonasi engundoqo iJekhpoth osemqoka ngcembe umdlalo. ngokunjalo, njengoko imiqondiso ukufumana endandiwafihla i bhobhile, kuyenzeka ukuba wenze kwibhola enkulu kulo slot. Kwi ngokungcakaza osemqoka Progressive, akukho iindibaniselwano zedosi ngokuphumelela ezifunekayo. Kufuneka nje ukuba azibuyisele bhobhile yigolide eyihleleyo randomly xa esijikelezayo. Ukubuyela Umdlali ipesenti kulungile kakhulu njengoko slot inika nokuhlawulwa malunga 96.43% ixesha . Uluhlu ukubheja kuqala £ 0,20 aze aye kutsho kwi £ 500. Ukujonga nokungazinzi, umdlalo inikela ethile phakathi eliphantsi hexa eliphakathi ukuya, nokuba, ngenxa jackpots ngcembe, abantu eziphakamileyo-womngcipheko kakhulu ucimayo unxano lwawo.
Imvelaphi kunye elinesandi ziye ephucukileyo kwaye zilungelelaniswe kakuhle umxholo Super Diamond Deluxe. IGT unezinye zokubeka eyahlukeneyo enxulumene kakhulu kulo mxholo, kodwa oku slot limi ezahlukeneyo ngokujonga ekunyaniseni enjoyability ye Gameplay. Ngoko ke, abantu nje sifuna ukuba ixesha fun ngokuqinisekileyo kufuneka uhambe uyokwenza le slot.